दोश्रो चरण निर्वाचनको सन्देश | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
दोश्रो चरण निर्वाचनको सन्देश
आम सर्वसाधारणमा आफ्नो चाहना र भावना अभिव्यक्त गर्ने स्वतः स्फूर्त गतिविधि निर्वाचनहरुका माध्यमबाट प्रकट भएका छन् । जनतामा सार्वभौम सत्ता अन्तरनिहित छ भने केही स्वनामधन्य “घुइतडीको शेड्या” हरुका हाक कति सम्म निरर्थक हुने रहेछन् भन्ने प्रष्ट सन्देश दोश्रो चरणको निर्वाचनबाट सिद्ध भएको छ । लाठी जुलुश, मसाल जुलुश, हिंसा, तोडफोड गरी आतंकित पार्ने केही ढाल शोषकहरुका चुनाब बहिष्कार मात्र होइन विथोल्ने धम्की हास्यास्पद मात्र होइन कसको औकात के हो थियो र हुने रहेछ भन्ने प्रष्ट सन्देश प्रत्याशिहरुका फेहरिस्तबाट प्रकट भएको छ । रा.ज.पा. नामको गुटले चुनाव विथोल्ने धम्की दियो तर यसका कथित कार्यकर्ता धमाधम दल परिवर्तन गर्दै कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा सहभागी भए । सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला लगायतका शीर्ष नेता त्यस्ता उम्मेदवारका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने भन्दै मत माग्दै हिडे । यो गुट भन्दा त उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदारहरुले राजनीतिज्ञको पहिचान प्रदर्शन गरे जसलाई महतो राजकिशोरहरुले गद्दार सम्म पदवी थमाए । दोश्रो शब्दमा उनिहरु जस्ता व्यक्तिको नेतृत्व नस्वीकार्ने जत्ति सबै शोषक र मधेश विरोधी भनि आक्षेप लगाए ।
अब उनिहरु कै शब्दावली प्रयोग गर्दा हामी कञ्चनपुरका मदीशे मात्र होइन पुरा तराई मैदानी भागहरुमा सर्वाधिक बढी मत खसे । त्यसो भए यी बोकाहरु कसको नेतृत्व गरी रहेका छन् ? गएको संविधान सभा निर्वाचनमा चुनाव हार्ने त्यसलाई भारतको हार भनि खुलेआम भाषण गर्ने राजेन्द्र महतो त्यस्तै राजकिशोर यादव भन्ने व्यक्तिले ताल ठोक्दै आऊ देखाइ दिन्छौं भनि राज्यलाई हाक दिए । मदीसे भनि हामीहरुलाई परिभाषित गर्ने हाम्रै विरुद्ध नस्लवादी सोच भनि विष वमन गर्ने यी को हुन् ? आम सर्वसाधारणले यिनिहरुलाई स्पष्ट सन्देश त दिए । यो लेखी रहदा अफसोच हुन्छ विना औकातका देशदोद्रीहरुको चर्चा गर्दा समेत अपराध बोध भइ रहेको छ । अब सरकारले के गर्छ होला ? तुष्टीकरण कै नीति अवलम्बन गरी केही ब्वाँसाहरुलाई महिमा मण्डित गर्ला वा कानूनलाई आफ्नो काम गर्न दिइएला ?
नेपाल राष्ट्र महान पूर्खाहरुले आर्जन गरेको स्वतन्त्र स्वाभिमानी देश हो, रही रहन्छ । सबैलाई मिलाएर लग्ने अर्ति उपदेश दिने कथित मित्र राष्ट्रले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु राम्रो होला । दार्जिलिङ, कश्मिर, उत्तर पूर्वी राज्यहरुमा के भइरहेको छ ? किसानहरु आत्महत्या गरी रहेका छन् । ती सब हेरन, हामी आफ्ना समस्या आफै समाधान गछौं तर दुर्भाग्य यो छ कि नेपालमा भाते नेता मात्र प्रशस्त पैदा भए, राष्ट्रभक्त भिजन भएको देखिएन । निर्वाचनका अनेक क्रमहरुबाट सानो ठूलो सबै पदवीका लागि आश्चर्यजनक हानथाप देखियो । नाता, रिश्ता, उमेर केही परवाह भएन । किन यस्तो भएको होला ? लोक सेवा आयोगमा खरिदार सुब्बाका परिक्षामा सामेल हुनु भएको छ ? कमिशन, घुसको सीमा नै छैन । धूर्त व्यक्ति सहजै सानो पदबाट पनि धनाड्य बने । २० वर्ष सम्म जन प्रतिनिधि नहुदा स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुका लागि स्वर्ण युग बन्यो । विगत ४४ वर्ष देखि कानून व्यवसायमा थिए तर तिकड्म नजाने हात मुख जोर्न पनि मुश्किल परेका अनुभव छन् । सामान्य जागिरे कसरी ऐश्वर्यमय जीवन विताउँछन् ? त्यो त कर्मचारीहरुका विषय भए । तिनलाई दोष दिन वर्ता नै उत्पीडन ठहरिएला किनभने जनप्रतिनिधि पदस्थापना नहुदै महंगा गाडी, स्मार्ट फोन, निःशुल्क मान सम्मान रकम सबै मिल्ने भएपछि ८९ वर्षका शमशान कुरेका व्यक्तिले त्यसमा हाम फाल्नु कुनै अनौठो भएन । ८० वर्ष माथिका त पचासौं उम्मेदवार भएको सन्चार माध्यमहरुमा आयो । कर्मचारी हुनका लागि त शैक्षिक योग्यता उमेर हद लाग्छ तर यी प्रतिनिधि बन्न इच्छुकहरुका लागि केही शर्त छैन । विना लगानी पदवी पाउनु पनि नयाँ नेपालको पहिचान बनेको छ ।
निर्वाचनका बेला ठाउँ ठाउँमा विष्फोट भएका बम र मधेसका हकमा तात्विक भिन्नता त देखिएन । रोल्पामा त हिंसक गतिविधि गरी रहेका चुनाव विरोधीहरु नै उम्मेदवार बने । यस्ता परिहासजनक दृश्य वस्तुतः जनमतको विपरित रहेछन् भन्ने प्रष्ट सन्देश गएको छ भने कथित सरकार घुँडा टेकेझैं लखतरान भएकै हो त ? गहिरिएर हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन किनभने यो रणनीतिको हिस्सा बेनकाव गर्ने एउटा कौशल देखाए जस्तो लाग्छ । यस भित्र घात प्रतिघात पनि देखिन्छ । एउटा सशक्त दललाई अर्काले तेश्रो संग भिडाएर फाइदा लिने प्रपन्चको माग भएकोमा शंका गर्न नमिल्ने भएको छ । नेपाललाई स्थानिय निर्वाचन पछिका अनिश्चित द्वन्दका भुवरीहरु पार गर्न सजिलो होला ? चुनाव विरोधी हाक दिएर राज्यलाई चुनौती के वास्तविक थियो र छ ? त्यो पनि यथार्थ नहुन सक्छ किनभने अस्थिरताले परिवर्तनलाई निरर्थक भुल भन्ने साबित गर्नेहरुका लागि अमृत वर्षा
भइरहेकै हुनुपर्छ ।
← असफल नेतृत्व
स्थानिय निकायको निर्वाचन २०७४ →